China Juda kiln -300T / D usoro ntinye -EPC ụlọ ọrụ mmepụta ihe na ndị nrụpụta | Juda
Usoro teknụzụ ：
Usoro batrị: a na-ebuga nkume na kol na nkume bọket na bọket na eriri; a na-etinyezi nkume na-eri ihe n'ime eriri na-agwakọta site na feeder.
Usoro nri: a na-ebuga okwute na kol na-echekwa na belt agwakọtara na hopper, nke ikuku na-arụ iji mee ka hopper na-erugharị na ala maka nri, nke na-eme ka ụda njem dịkwuo mma ma nweta arụmọrụ dị elu na nchekwa nchekwa.
Usoro nkesa: agwakọta ngwakọta nke okwute na kol n'ime ebe a na-echekwa ihe site na feeder na n'ime feeder rotary. A na-edozi ngwakọta ahụ n'otu akụkụ nke kiln ahụ site na multi-point rotary feeder.
Wayo ịrụzu usoro: mgbe calcined wayo nkume dị jụụ, ndị okokụre wayo na-atara ha wayo ịrụzu belt site n'akụkụ anọ na-ebutu igwe na abụọ na ngalaba nke ikuku mkpọchi valvụ. Ọ bụrụ na ị ga-agbapụ, a ga-agbanwe ntụzịaka na ọnụọgụ lime iji mezuo ọkụ na isi.
Removaljá mwepụ usoro: Mgbe a na-agbazi ọkụ ọkụ, uzuzu nwere anwụrụ ọkụ na gas na-ebu ụzọ site na mkpokọta ájá cyclone iji wepu nnukwu ájá; Mgbe ahụ n'ime nzacha akpa iji wepu obere ájá; Mgbe ị banyere na mmiri ihe nkiri mmiri, ikuku ọkụ ga-ete megide ihe nkiri mmiri mgbe niile, na uzuzu uzuzu ga-agba mmiri. Ọ ga-abanye na ala nke ihe nchara uzuzu ya na mmiri na-asọba ma gbanye ya n'ime tankị sedimentation. Mgbe ọdịda, a ga-emegharị mmiri dị ọcha.
Electric akara usoro: N'ịnabata German Siemens kọmputa akara usoro, n'ụzọ zuru ezu akpaka mmepụta akara, eri-azọpụta, anụ ngwaahịa mma.
Nke gara aga: Wayo Ime Production Line
Osote: Juda Kiln-Inner Mongolia 300T / D × 3 gburugburu ebe obibi dị mma nke wayo na-emepụta
Calcium hydroxide akụrụngwa, Calcium oxide na Calcium hydroxide, Ime Calcium hydroxide, Aha Azụmaahịa nke Calcium Oxide, Calcium Hydroxide Ime, Calcium hydroxide Production Line akụrụngwa,